March 2015 - Myanmar News Plus
အခုချိန်ကပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ နွေရာသီပီပြင်လှတဲ့ မတ်လကို ကုန်လွန်လာပါပြီ။ ဒီအချိန်ကတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသားတွေအတွက် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲကြီးကိုပူပူနွေးနွေး ဖြေဆိုပြီးစ အချိ်န် ဖြစ်သလိုစာမေး ပွဲဖြေနေတဲ့ တက္ကသိုလ် အသီးသီးကကျောင်းသားတွေ အတွက်လည်း နွေကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်ကာလကစောင့်ကြိူလို့နေ ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ မြို့ပြရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာကျင်လည်မွန်းကျပ်နေ သူတွေအတွက် သင်္ကြန်အားလပ်ရက်ရှည် ကာလကတဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာပါပြီ။ ဒီအချိန်ဟာခေတ်ရေစီးထဲကလူငယ်တွေအတွက် အပြင်ထွက် တဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ်အားလပ်ရက်မှာအပန်းဖြေခရီးတွေ သွားတဲ့အခါ ပူပြင်းတဲ့နွေကိုကာကွယ်အန်တုလို့ ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းထဲအလိုက်သင့်မျောနေတဲ့ လူငယ်၊ လူရွယ်တွေအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုတာရာသီဥတု အချိန်အခါနဲ့ ကာလံဒေသံကိုလိုက်ပြီးလည်းဝတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အခုလို နွေကာလကပူပြင်းတယ် ဆိုတော့ ဒီလို နွေနေပူမှာယောကျာ်း၊ မိန်းမမရွေးလူငယ်လူရွယ်တွေ အနေနဲ့ နွေနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် အရောင် လွင်လွင် ချည်သား Shirt အင်္ကျီ၊ Short Pants ဘောင်းဘီအတိုတွေ ၀တ်ဆင်မယ်ဆို အထာလည်းကျ၊ […]
ကြမ်းတမ်းနေတဲ့သင့်လက်ဖဝါးတွေ ကို အချိန်တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ နူးညံ့သွား စေမယ်ဆိုရင် သင်အံ့သြ သွားလေမလား။ မယုံမရှိနဲ့ အခုပဲလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကြမ်း ထော်နေတဲ့ လက်ဖဝါးတွေ ညက်ညော သွားစေရုံမက ဝင်းမွတ်လာတော့မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ အသုံးပြုရမည့်ပစ္စည်းများမှာ- သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းခန့်၊ သံလွင်ဆီ(သို့)အုန်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းခန့်သကြားနှစ်ဇွန်းခန့်ကို လက်ဖဝါး ထဲသို့လောင်းထည့်ပါ။ ပြီးရင် သံလွင်ဆီ (သို့)အုန်းဆီနှစ်ဇွန်းခန့်ကိုလောင်းထည့်ပါ။ သကြားနဲ့ဆီတွေရောသမသွား အောင်လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကိုခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်တိုက်ပါ။ (ထိုအရောအနှောတွေ အောက်သို့ကျမသွားအောင်လက်ဖဝါးချင်း သေသေချာချာပွတ်တိုက်ပါ။) အသားထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားအောင် လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကို စက်ဝိုင်းပုံဏ္ဌာန် အဖြစ် ပုံစံအမျိုးမျိုးပွတ်ပေးပါ။ လက် ဖဝါးတွေကို အားရအောင်ပွတ်ပြီးတဲ့အခါ လက်ခုံ၊ လက်ဖမိုးတွေကိုပါ ဆက်၍ ပွတ် တိုက်ပေးလိုက်ပါဦး။ အားရပြီဆိုပါက လက်ကို ဆပ်ပြာ ဖြင့်ဆေးကြောပါ။ ပြီးရင် သြိပ လိုးရှင်း […]
Relationship တစ်ခု တည်မြဲဖို့ဆိုတာ မိန်းကလေးဘက်က အပြုအမှုနဲ့လည်း အများကြီးသက်ဆိုင်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီလောကကြီးမှာ ရုံးဆင်းတိုင်း ကိုယ့်ကိုလာကြိုပေးနိုင်မဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာ မရှိသလို တစ်သက်လုံး ကိုယ့်ကို စကားတစ်ခွန်းမှ မလိမ်မညာမဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ တစ်သက်လုံးကိုယ့်ကို မခွဲမခွာ ကိုယ့်အနားမှာပဲ သစ္စာရှိရှိ နေထိုင်ပေးမဲ့ ယောကျာ်းကတော့ ရှိပါသေးတယ်။ နှစ်ယောက်သား ရေရှည်ဆက်လျှောက်ဖို့ဆိုတာ အလျှော့အတင်းလေးတွေ လုပ်ပေးရတာမျိုးလေးတွေ ရှိရပါတယ်။အမြဲတမ်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာချည်းပဲ တောင့်တနေလို့မရပါဘူး ။ သူ့ဘက်က ချို့ယွင်းချက်တွေရှိလာရင်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ခွင့်လွှတ်ပေးရင်း ကိုယ့်ရဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေ ကြီးမလာအောင်လည်း ဂရုစိုက် ပြုပြင်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းမကောင်းဆိုတာ အချိန်ပြည့်ကိုယ့်အနားမှ နေပေးမှ ၊ အမြဲကိုယ်လိုရာဝယ်ပေး ဖြည့်ပေး ဆောင်ရွက်ပေးမှ ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး ။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်သူ့ဆီကနေ မျှော်မှန်းထားတာလေးတွေကို အရမ်းကြီးမထားပဲ အမြင်တစ်မျိုး ပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါ။ သူလည်း စိတ်ချမ်းသာရသလို […]
ဆောင်းတွင်းမနက်စောစော အုန်းမောင်းခေါက်သံကြောင်.မုဆိုးကျော် တစ်ယောက် အိပ်ရာမှနိုးလာပြီး မထချင် ထချင်နှင်. အိပ်ရာတွင်းမှထပြီးအမဲလိုက်ဖို.ပြင်ဆင်တော.သည် …ထိုအချိန်မိန်းမက ရှင်ကလည်း ဒီလောက်အေးနေတာကြီးကို သွားမနေပါနဲ.တော. ကျွန်မနဲ.ပဲ အတူတူနေပါ အာ..မဖြစ်ပါဘူးကွာ သွားမှဖြစ်မှာ အကုန်ချိန်းထားပြီးသား ပြောပြောဆိုဆို မုဆိုးကျော်တစ်ယောက် အိမ်ကထွက်လာရင်း ဆုံနေကြနေရာမှာ အပေါင်း အသင်းတွေစောင်.တော. တစ်ယောက်မှ ပေါ်မလာဘူးတဲ့…ဒါနဲ.မထူးဘူးဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်မိုးကလည်း ကောင်းကောင်းမလင်းသေးတော. အ၀တ်အစားတွေ ပြန်ချွတ်ပြီး အိပ်ရာထဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော. ချမ်းလိုက်တာကွာလို.ပြောပြီး မိန်းမကို ဖက်လိုက်ပါတယ် ဟုတ်ပါရဲ.ရှင် အိမ်ကတစ်ယောက်ကတော.မသွားပါနဲ.ပြောတာကိုမရဘူးလေ ကျွန်မကပိုတောင်ကြိုက်သေး……….တဲ့ ဟာသရပ်ကွက်
မိန်းကလေးတွေ‬ တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်ရင်း အချိန်ကြာသွားတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်တတ်ကြသလဲ။
မိန်းကလေးတွေ တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်ရင်း အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ လက်တွဲဖေါ်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာ ခံစားချက်တွေက သူများထက်ပိုပြီး လွန်ကဲတဲ့အပြုမူလေးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ အနားမှာ ကိုယ့်ကိုပိုးပန်းသူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ရှိနေပါစေ ဆီလိုအပေါက်ရှာပြီး အပြစ်တွေမြင်လာတတ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှာ ပြည့်စုံတယ်လို့ကို မထင်မိကြတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တဖြည်းဖြည်း ပိုပိုပိုပြီး အထီးကျန်ဆန်လာရပါတော့တယ်။ ဘယ်လိုအတွေးအမြင်တွေကြောင့် ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာရတာလဲ ? ၁) ယောကျာ်းမှန်သမျှ မကောင်းဘူး။ တစ်ဘတ်သတ်အမြင်တွေ များလာပြီး ရှိရှိသမျှယောကျာ်းလေးတွေအားလုံးကို သံသယရှိလာပြီး မကောင်း ဘူးလို့ပဲ အမြဲတစ်ထစ်ချ ယူဆလာပါတယ်။ ရုပ်ဆိုးပြန်ရင်လည်း မမိုက်ဘူးထင်တာတို့၊ ရုပ်ချောပြန်ရင်လည်း ခြောက်နေလားမသိဘူးလို့ထင်တာတို့ ၊ အ၀တ်စားအရင့်ဝတ်ရင့်လဲ တောဆန်တယ်တို့၊ အရောင်နုဝတ်ရင် မိန်းမလိုမိန်းမရဖြစ်တယ်တို့၊ အလုပ်အ ရမ်းလုပ်ပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ အစရှိသဖြင့် သေးသေးလေးတွေကို ဇာချဲ့ပြီး မြင်လာကြပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ ချို့ယွင်းချက်ဆိုတာရှိပါတယ်။ […]
အချစ်ရေးတစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ သော့ချက်တချို့ကတော့ သင်တို့အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြုမူဆက်ဆံတတ်ကြတဲ့ အသေးအဖွဲ့ကိစ္စလေးတွေထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်လေးတွေကို တချို့က မေ့လျော့ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအရာတွေကများ အချစ်မီးတောက်လေး အမြဲတောက်နေအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တာပါလိမ့်။ မေ့လျော့နေတာလေးတွေ တူးဆွကြည့်ရအောင်။ (၁) “I Love You” လို့ပြောတာကို ဘယ်တော့မှ မရပ်တန့်ပစ်ပါနဲ့။ ဒီစကားသုံးလုံးဟာ အမျိုးသမီးတစ်ရောက်ရဲ့ ရင်ထဲ စွဲမြဲနေစေနိုင်တာကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့။ (၂) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ကြတဲ့အခါ နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးတွေ ပေးဖို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့။ (၃) အိပ်ရာထဲရောက်ချိန်နဲ့ အခြေအနေပေးတဲ့ အချိန်တွေမျိုးမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နွေးထွေးစွာ ပွေ့ဖက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ (၄) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်စနောက်ပြီး ပျော်စရာလေးတွေ ဖန်တီးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ (၅) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခဏတာ […]
အမျိုးသားတွေက အမြဲတမ်းပဲ သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးကို စွဲဆောင်ထားစေနိုင်ဖို့ အလိုရှိတတ်ကြပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇနီးချောလေးကို ပျော်ရွှင်ပြီး အမြဲတမ်းသာယာနေစေဖို့ ဒီအချက် (၅)ချက်တော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ (၁) သူမတို့ဘက်က အမြဲတမ်းရှိပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဘက်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေတယ် ဆိုတဲ့အသိလောက် ကျေနပ်စရာ ကောင်း တာမရှိပါဘူး။ သင့် ပါတနာရဲ့ အကြီးစား fan တစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူမကို အသိပေးပါ။ ဒါကို ရိုးရှင်း လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သဘော ကျကြောင်း ၊ ဘယ်လောက်အထင်ကြီးကြောင်း ပြောပြပေးရုံပါပဲ။ (၂) သူမတို့ရဲ့ ၀ါသနာကို အားပေးပါ။ သင်က ထိုက်သင့်တဲ့ အကြံဥာဏ်တစ်ချို့ ပေးခဲ့ရင်တောင် လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သူမမှာ သေချာတဲ့ ၀ါသနာတစ်ခု ရှိနေလို့ပါ။ […]
ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မယ်ဆိုကတည်းက သင့်အနေနဲ့ သူမကိုဆုံးရှုံးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ မေးခွန်းက – သင့်အနေနဲ့ သူမကိုပြန်ရယူချင်သလား?။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လမကလို့ တစ်နှစ်လောက်အလွန်ကပဲ ပြတ်ခဲ့ပါစေ ပြန်လည်ရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်း နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုပြောပြတဲ့နည်းလမ်းတွေ ၊ စည်းမျဉ်းတွေကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဘ၀မှာ အခွင့်အရေးဆိုတာ (၂)ခါမလာတတ်ပါဘူး။ (၁) လမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို နားလည်ခြင်း လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်ဆိုကတည်းက နားလည်မှုလွဲခဲ့ရခြင်း တချို့နဲ့ အမှားတချို့တို့ကတော့ မလွဲမသွေရှိခဲ့မှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီတော့ သင့်အနေနဲ့ အလုပ်သင့်ဆုံးက “အတိတ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်” ပါ။ ဒီတော့ တဖြည်းဖြည်း ပိုပိုဝေးမသွားခင် တချိန်ကဘာမှားခဲ့လဲဆိုတာ တတ်နိုင်သမျှ ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဆိုရိုးစကားတစ်ခုကိုသတိရပါ။ “သင်က တခြားတစ်ယောက်ကို လက်ညှိုးတချောင်းထိုးနေချိန်မှာ ကျန်တဲ့ သုံးချောင်းက […]
အမျိုးသားတွေ အလေးထားတဲ့ အံ့အားသင့်စရာအချက်လေး ၇ချက်
တစ်ခါတစ်လေ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သူတို့ချစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေနဲ့ အတွဲညီညီလက်တွဲဖို့ ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင် ဆိုင်နေရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာရယ် သူဖြစ်ချင်တာရယ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကို နားမလည်သေးလို့ပါ။ အမျိုးသားတွေရဲ့ စိတ်က သိပ်ကို ရိုးရှင်းလွန်းလို့ အမျိုး သမီးတွေနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ အကယ်၍အခုပြောမယ့် အချက်တွေကိုနားလည်သွားပြီးဆို ရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာရှေ့လျောက်ဖြောင့်ဖြူးနေမှာသေချာပါတယ်။ ၁. လေးစားမှု အမျိုးသားတွေအတွက် အရေးကြီးဆုံးနဲ့ အလေးထားဆုံးအရာကတော့ လေးစားသမှုပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီက လေးစားသမှုကိုရရှိခဲ့ရင်တောင် ဘာမဆို လုပ်ပေးတတ်တဲ့ယောက်ျား တွေမို့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့သာ လေးစားသမှုရှိခဲ့ရင်တော့ ပြောစရာတောင် မလိုတော့ဘူးနော်။ လေးစားသမှုမ ရှိချင်းဟာ သူကိုယ်သူ တန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူတတ်ခြင်းအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်သလို နာကျင်ခြင်းကိုပါ ခံစားရစေပါတယ်။ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးအပေါ် ဆိုးနွဲ့အနိုင်ယူချင်တာနဲ့ သူ့ အပေါ်လေးစားသမှုပျောက်သလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
ချစ်သူကို ဘယ်လိုချစ်မလဲ ???
၁ – နေ့တိုင်းတွေ့နေဖို့ လိုအပ်ပါသလား ? မလိုအပ်ပါဘူးonline မှာနေ့တိုင်း စကားပြောဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်သူကော ကိုယ်ကော အားမယ့်အချိန်နဲ့အဆင်ပြေအောင် ကြာချိန်ကို ညှိမှဖြစ်မှာပါ( ချစ်စ ကြင်စကိုတော့ မတားလိုပါဘူးတစ်လလောက်ကြာရင်တော့ ညှိဖို့လိုအပ်ပါပြီ ) ***** ၂ – ရည်းစားထားမှာလား ! အပျော်ရည်းစားထားတာ ဆိုရင်တော့တချို့အရာတွေ မစမ်းသပ်သင့်တာကလွဲရင် ကျန်တာ ok ပါတယ်တခုပဲ ရည်းစားများတာ ဖန်စီဆွဲကြိုးတွေပြောင်းဆွဲသလိုမလန်းပါဘူးကြာရင် သိက္ခာကျပြီး နာမည်ပျက်နိူင်ပါတယ် ***** ၃ – ချစ်သူထားမှာလား ! ချစ်သူထားတာဆိုရင်တော့ သူ့ကိုချစ်တာနဲ့သူချစ်တာကိုခံရဖို့ အချစ်တွေဖြူစင်ဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းဖို့ ဘာမှမစွန်းထင်းဖို့လိုပါတယ် ***** ၄ – တစ်ဘဝလုံးရည်ရွယ်ပြီးထားမှာလား ? တစ်ဘဝလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီဆိုရင်တော့သူ့အတိတ် ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကို သိဖို့လိုပါပြီကိုယ့် အတိတ် ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း […]